China Green ecacileyo C102 mveliso kunye nabenzi | IBaizan
I-Baizan 0.76mm pvb yefilimu eluhlaza kucacile kwiglasi yemoto kwiglasi yemoto
Imiqathango Intlawulo: TT LC DP
Uvavanyo lokuchasana nefuthe
Lungisa iziqwenga ezili-12 ezingama-300 * 300 mm zeglasi enobunzima obuyi-2 mm, uzihlambe kwaye uzibeke zithe tyaba, ubeke isampulu kwiglasi kwaye ubeke enye iglasi kuzo, emva koko usike iglasi, nikela ingqalelo ukunqanda ukolula ifilimu, kunye nokuqinisekisa ukuba ngaphandle kweglasi yedayaphragm margin kwi-2mm okanye njalo. Emva koko beka iglasi yefilimu ephakathi ehlanganisiweyo kwigumbi elinomshini kwi-160 ± 5 ° C kangangemizuzu engama-90 phantsi koxinzelelo olubi lwe-8.5 ~ 104 PA. Emva kokuba iziqwenga ezithandathu zibekwe kubushushu obungama-20 ± 5 ° C ubuncinci iiyure ezi-4, iziqwenga zazigxunyekwe kwisibiyeli somzekelo somatshini wovavanyo lweglasi, kwaye ubunzima buyi-2260 G ± 20 G, ibhola yentsimbi enobubanzi obumalunga ne-82mm yehle ngokuthe nkqo ukusuka kubude be-4M (ngaphakathi kwe-3 °), inqaku lempembelelo kufuneka libe phakathi kwe-25mm yeziko lesampulu, ukuba ibhola yentsimbi ayingenanga kwisampulu ngaphakathi kwe-5, kwaye zonke iziqwenga ezi-6 kuvavanyo kuhlangabezana neemfuno ezisemgangathweni kwaye kuya kugwetywa ukuba kufanelekile; Ukuba iimvavanyo ezi-4 okanye ezingaphantsi ziyahlangabezana neemfuno zomgangatho ziya kugwetywa njengezingalunganga; ukuba iimvavanyo ezi-5 zonke ziyahlangabezana neemfuno zomgangatho, yongeza iziqwenga ezi-6 iisampulu ezintsha, ukuba ezi-6 zonke ziyahlangabezana neemfuno zomgangatho lowo
Uvavanyo lokumelana nokufuma
Kuqala, vula amandla ebhokisi ebilayo yamanzi kunye nokufudumeza amanzi ukuya kwi-100 ℃. Lungisa isiqwenga seglasi 300 * 300mm kunye nobunzima njenge-2 mm.
Beka iglasi kwibhokisi engenawo kwaye uyigcine imizuzu emi-5. Emva koko yikhuphe kwaye uyibilise ngokuthe ngqo kwibhokisi ebilayo. Ke jonga ukuba akukho bubble okanye mhlophe okanye ezinye iimeko ezingaqhelekanga, kugwetywa ukuba kufanelekile. Ukuqhekeka kuvunyelwe, kodwa akukho bubbles, ukuguqulwa kombala, okanye ezinye iziphene ezinokuthi zenzeke i-15mm ngaphaya komda okanye i-10mm ngaphaya kwe-crack.
Egqithileyo Luhlaza okwesibhakabhaka kwiC101 ecacileyo
Okulandelayo: Uluhlaza mnyama ekukhanyeni okuluhlaza FG101
Oluhlaza ngokuCoca iPvb yeFilimu
Bomvu R101 / Rose ebomvu R108